Ho fanatsarana ny kalitao sy ny fahadiovana ary indrindra hamehezana ireny fako miparitaka eny anivon'ny hopitaly sy ny CSB ireny dia hisy ny fiaraha-miasa amin’ny ONUDI. Hitondra anjara birikiny amin'ny fampitaovana sy fanohanana amin'ny "déchets médicaux" eny amin'y tobim-pahasalama izy ireo mba ahafahana mitantana ireny fako ireny araka ny tokony ho izy , ary indrindra ahafahana manaja ny tontolo iainana. Hisy arak'izany ny fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao izay hapetraka eny amin'ny hopitaly sy ny CSB, handorana ireny fako ireny. Tsy vitan'ny fampitaovana ihany anefa fa hisy ihany koa ny fampiofanana ireo olona mikirakira ireo fako eny amin'ireny tobim-pahasalamana ireny. Ny tanjona amin'izany dia ny mba tsy himparitahan'ireny fako eny amin'ny tobim-pahasalama ireny indrindra amin'izao fisian'ny valanaretina covid-19 izao, araka ny fanazavana.